စက်တင်ဘာထာဝရ: ♥Happy 98th Birthday of General Aung San (Myanmar National Hero) ♥ ( ပြည်သူများရဲ့တို့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း မွေးနေ့ကိုလေးစားစွာဖြင့်ဂုဏ်ပြုပါသည်)
♥Happy 98th Birthday of General Aung San (Myanmar National Hero) ♥ ( ပြည်သူများရဲ့တို့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း မွေးနေ့ကိုလေးစားစွာဖြင့်ဂုဏ်ပြုပါသည်)
♥ဦးဘ၀င်း..ခင်ဗျား ညီအငယ်ဆုံးလေးကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။
♥ရဲဘော်ကျော်စိန်....ခင်ဗျားကားမောင်းရင် သတိကို ငယ်ထိပ်မှာကပ်ထား
♥ဟေ့လူ...ပလေဒီယံရုပ်ရှင်ရုံမန်နေဂျာ..သူ့ဟာသူ ငါးမူးတန်းက ကြည့်ကြည့် ၊ တစ်မတ်တန်းက ကြည့်ကြည့်
♥အမွိုင်....မင်းမြေကို သူနင်းလိုက်တော့ တွန့်မသွားဘူးလား
♥ဦးစော...ခင်ဗျားကို မေ့ထားပါ့မယ်။ခွင့်လွှတ်လို့တော့ မရသေးဘူး။
♥မစ္စတာနေရူး...ခင်ဗျားသူ့ကို လောင်းကုတ်ကြီးပေးလိုက်တာ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ
♥ဆြာ စတက်ဖို့ကရစ်ပ်....သူ ခင်ဗျားအကျီအိတ်ကြီးပြဲသွားအောင်
By Heinn Five Strings
မူလ စာရေးသူက တစ်ပါဒ စီ ရေးတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ... တစ်ပါဒ စီ share လို့ ရနုိုင်ပေမယ့် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်စေချင်လို့ (ဖတ်ချင်လို့) copy & paste လုပ်ပြီး credit ပေးပါတယ် ... ဒီမှာ နောက်ဆုံးပါဒကို မူလစာရေးသူက နောက်ဆုံးမှာ မထားပေမဲ့ ကျနော် နောက်ဆုံးကို ရွှေ့ထားဖြစ်ပါတယ် ... ကျနော်လေးစားတဲ့ ဗိုလ်ချူပ် (ဦးအောင်ဆန်း) ရဲ့ မွေးနေ့မှာ သူ့ကို အောက်မေ့တသတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ တင်ဖြစ်စေတဲ့ မူလစာရေးသူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
(note copy via 'Tin latt/photo fr'google)
ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၃. ၂. ၂၀၁၃)တွင် ကျရောက်သော တစ်မျိုးသား၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး ။လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဦးအာင်ဆန်း၏ (၉၈) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အား ဂုတ်ပြုသောအားဖြင့်၂၀၀၇ခုနှစ် မျိုဆက်မှာ အမှတ်တမ်းပြုပါသည်။
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 10:51 PM